ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာများလားဆိုတဲ့ သူမကိုယ်သူမ အပြစ်တင်ကာ ဝမ်းနည်းနေသူ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း………. – Shwe Naung
N N | September 19, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုး သင်းကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစ ရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီး ပြီးသား ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။
နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ အနုပညာ နယ်ပယ်မှာ ပရိသတ် အခိုင်အမာနဲ့ အားပေးမှု ရရှိထားသလို ပျော်ရွှင် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူပါ.။
လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၂၁)ရက်နေ့မှာတော့ Covid-19 ရောဂါနဲ့ ချစ်ရသူ ခင်ပွန်းကို တာတာမျိုးရဲ့ ခွဲခွာမှုကို ရုတ်တရက် ခံစားရပေမယ့် ကလေး နှစ်ယောက်နဲ့ သူမရဲ့ ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေ ရသူပါ.။
Covid-19 ရောဂါပိုးကြောင့် သေကွဲကွဲ ခွဲခွာသွားရသူတွေ အများကြီး ရှိခြဲ့ပီး ပြန်လည် သက်သာလာကြသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး .။
ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့မှာတော့ နန်းမြတ်က သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အတွက် ဝမ်းနည်းခံစားရမှုတွေကို အခုလိုပဲ “သူများတွေသက် သာလာတာ တွေ့ရင်ဝမ်းလည် းသာတယ်။ ယောက်ျားအတွက် စဉ်းစားမိပြီးလည်း ဝမ်းနည်းတယ်၊
ငါပြုစုကုသတာ ဘာတွေများလိုသွားလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးကအရမ်းနှိပ်စက်တာပဲ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
သူမရဲ့ ပြုစု ကုသမှုတွေမှာ လိုအပ်ချက် ရှိသွားလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးခံလိုက် ရတာများလားဆိုတဲ့ သူမကိုယ်သူမ အပြစ်တင်ကာ ဝမ်းနည်းနေသူ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း အတွက် ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေး စကားလေးတွေ ပြောပေးခဲ့ ပါဦးနော်.။
လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
အထာကျကျ ကောက်ကြောင်းအလှတွေ နဲ့ ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေတဲ့ အိချောပို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…